ခက်မာ: စက်ဘီးများ၊ ကြွက်သားများ၊ စီးကရက်များ ( ဇာတ်သိမ်း) 1. 2.
“ ဒီည ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ ကျနော်မသိတော့ဘူးမစ္စက်မေလာ။ ကျနော် ဒီကိစ္စကိုရော်ဂျာနဲ့ ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ လျော်ပေးမလားဆိုရင်တော့စက်ဘီးကိုပျက်စီးအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့အထဲ မှာရော်ဂျာပါတဲ့အတွက် ကျနော် သုံးပုံတပုံပေးပါ့မယ်။“
“ ကျမလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။“
အမျိုးသမီးကြီးက ဧည့်ခန်းထဲရောက်နေပြီဖြစ်သော ဟမ်မီလ်တန်နောက်သို့လိုက်လာရင်း ဆက် ပြောသည်။
“ ကျမလည်း ဂေးလ်ဘာ့တ်အဖေကိုပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။ သူကအခုခရီးထွက်နေတယ်။ တခုခုတော့ ဖြစ်လာမှာပါ။ နောက်တွေ့ကြဦးမယ်လေ။“
ဟမ်မီလ်တန်က တဖက်သို့ကပ်ပေးလိုက်သဖြင့် ကလေးနှစ်ယောက်က သူ့ကိုကျော်ပြီးဆင်ဝင် အောက် ၀င်သွားကြသည်။ သူတို့နောက်ဖက်မှနေ၍ ဂရေးဘားမန်း၏အသံကို ပီပီသသကြားလိုက်ရသည်။
“ သူက ကျနော့ကို ငတုံးလို့ခေါ်တယ်ဒက်ဒီ“
“ သူလုပ်တာမဟုတ်လား။ သူကမှ တကယ့်ငတုံး။ သူ့ပုံစံကိုက ငတုံးပုံပေါက်နေတာ“
မစ္စတာဘားမန်းအသံကိုပါကြားလိုက်ရတော့ ဟမ်မီလ်တန်က လှည့်ကြည့်ရင်းပြောလိုက်သည်။
“ ဒီညမှာတော့ ခင်ဗျားအတော့်ကိုတရားလွန်တာပဲ မစ္စတာဘားမန်း။ ဘာကြောင့်ခင်ဗျားကိုယ် ခင်ဗျားမထိမ်းနိုင်ရတာလဲ။“
“ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါလို့ မင်းကိုငါပြောတယ်မဟုတ်လား။“
“ မင်းအိမ်ပြန်တော့ရော်ဂျာ၊ သွားတော့။“
ဟမ်မီလ်တန်က သူ့နှုတ်ခမ်းကိုလျှာဖြင့်သပ်လိုက်ပြီးရော်ဂျာ့ကိုလှမ်းပြောသည်။ ရော်ဂျာနှင့်ကစ်ပ် ကလမ်းမပေါ်ထွက်ရာလမ်းကလေးဆီလျှောက်သွားသည်။ ဟမ်မီလ်တန်သည်တံခါးဝတွင်ပိတ်ရပ်လိုက်ပြီးသူ့ သားနှင့်အတု ဧည့်ခန်းကိုဖြတ်လျှောက်လာသောဘားမန်းကိုကြည့်နေသည်။
“ မစ္စတာ ဟမ်မီလ်တန်“
အမျိုးသမီးကြီးက အလန့်တကြားစကားစလိုက်ပေမယ့် စကားကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ပေ။
“ ခင်ဗျားဘာဖြစ်ချင်လဲ။ ကျုပ်ရှေ့ကထွက်သွားစမ်းပါ။“
ဘားမန်းက သူ့ပခုံးကိုဝင်တိုက်လိုက်သောကြောင့် ဟမ်မီလ်တန်မှာ ဆင်ဝင်အောက်မှနေ၍ ဆူးများရှိ သောခြုံပုတ်အတွင်းရောက်သွားသည်။ ထို့သို့ဖြစ်သွားတာကိုသူမယုံနိုင်ပေ။ သူသည်ခြုံပုတ်ထဲမှ ကုန်းထလာပြီး ဆင်ဝင်အောက်တွင်ရပ်နေသောဘားမန်းကို အားနှင့်ပစ်ထိုးလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်လုံး မျက်ခင်းပေါ်လဲ ကျသွားပြီး မျက်ခင်းပေါ်တွင်လုံးထွေးနေလေသည်။ ဟမ်မီလ်တန်သည် ဘားမန်း၏လက် မောင်းများကိုသူ့ဒူးနှင့်ဖိရင်း နောက်ကျောကိုလက်သီးနှင့်တရစပ်ထိုးနေသည်။ ဘားမန်း၏အင်္ကျီကော်လာ ကိုလည်းဆုတ်မိသွားပြီး ဘားမန်းခေါင်းကိုမျက်ခင်းနှင့်ဆောင့်တိုက်နေစဉ် မစ္စက်မေလာက အလန့်တကြား အော်တော့သည်။
“ ဘုရားသခင်.. သူတို့ကိုဖြည်ကြပါဦး။ ရဲခေါ်ကြပါဦး“
ဟမ်မီလ်တန်က ဘားမန်းခေါင်းကို မျက်ခင်းနှင့်ဆောင့်နေရာမှရပ်လိုက်တော့ ဘားမန်းကသူ့မျက် နှာကိုလည်ပြန်ကြည့်ရင်းအော်သည်။
အမျိုးသမီးကြီးက လူချင်းကွဲသွားသော အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းမေးသည်။
“ ဘာဖြစ်သွားကြသေးလဲ။ ဘုရား၊ ဘုရား...“
ပေအနည်းငယ်ခွာ၍ မောပန်းတကြီးအသက်ရှူနေကြသော ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကို သူမကရပ် ကြည့်နေသည်။ အသက်အကြီးဆုံးကောင်လေးက ဆင်ဝင်အောက်ရှိလူစုထဲတိုးဝင်လာပြီး ရန်ပွဲကိုကြည့်ဖို့
ကြိုးစားသော်လည်း ရန်ပွဲကပြီးနေပြီ။ ကလေးတွေက လူကြီးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်း ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်ကာရပ်နေကြသည်။ သူတို့က လက်မောင်းနှင့် နံရိုးများကိုကွယ်ရင်း တယောက်ကိုတယောက်
လက်သီးနှင့် ထိုးကြဦးမည့်ပုံ ဟန်ရေးပြနေကြသေးသည်။
“ ကလေးတွေ.. အိမ်ထဲပြန်ဝင်ကြစမ်း။“
မစ္စက်မေလာက ရင်ဘတ်ကိုလက်နှင့်ဖိရင်း ကလေးတွေကိုလှမ်းအော်သည်။
“ ဒီလိုဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ ကျမမထင်ထားခဲ့ပါဘူး“
ဟမ်မီလ်တန်မှာ ချွေးတွေရွှဲနေပြီး အသက်ရှူဖို့ကြိုးစားလိုက်တိုင်း သူ့အဆုတ်နေရာကပူလောင် နာကျင်လာသည်။ သူ့လည်ချောင်းထဲမှာလဲ တစုံတခုဆို့နင်နေသလိုဖြစ်နေပြီး မျိုချလို့လည်းမရပေ။ သူက လမ်းစလျှောက်ဖို့ကြိုးစားတော့ သူ့သားနှင့်ကစ်ပ်က ဘေးတဖက်တချက်မှဝင်တွဲသည်။ ထိုအချိန်တွင်
ကားတံခါးကိုခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပိတ်သံကြားလိုက်ရပြီး အင်ဂျင်လည်းစနှိုးသည်။ ကားရှေ့မီးကသူတို့ရှေ့ကို ဖြတ်ထိုးထား၏။ ရော်ဂျာကတချက်ရှိုက်လိုက်သည်။ ဟမ်မီလ်တန်က သူ့သားပခုံးပေါ်လက်လှမ်းတင်လိုက် သည်။ ကစ်ပ်ကလည်းစတင်ငိုကြွေးရင်းပြောလေသည်။
“ ကျနော်ပြန်တော့မယ်။ အဖေ ကျနော့်ကိုရှာနေတော့မယ်။“
“ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး မင်းမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက် ဒက်ဒီစိတ်မကောင်းပါဘူးသားရယ်။“
သားအဖနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာရင်း သူတို့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ဟမ်မီလ်တန်က သူ့သားပခုံးပေါ်ကလက်ကိုဖယ်လိုက်သည်။
“ တကယ်လို့ သူကဒါးဆွဲထုတ်ရင် ဒါမှမဟုတ်တုတ်နဲ့ရိုက်ရင် ဒက်ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲ။“
“ သူအဲဒါမျိုး မလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာ။“
“ တကယ်လို့ လုပ်ခဲ့ရင်ကော။“
“ လူတွေက ဒေါသထွက်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲဆိုတာ ပြောရခက်တယ်ကွ။“
သူတို့ အိမ်ရှေ့တံခါးဆီ ဦးတည်မိကြပြီ။ အလင်းရောင်တွေထိုးထွက်နေသော သူတို့အိမ်ရှေ့တံခါး ကိုမြင်တော့ သူ့စိတ်တွေပျော့ပြောင်းလာသည်။
“ သားအိမ်ထဲအရင်ဝင်။ ညနေစာစားပြီး စောစောအိပ်တော့။ မင်းမာမီကို ဒက်ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်။ ဒက်ဒီဆင်ဝင်အောက်မှာ ခနထိုင်လိုက်ဦးမယ်။“
ကောင်လေးကခြေလှမ်းတလှမ်းစလိုက်ပြီး သူ့အဖေမျက်နှာကိုကြည့်ကာ နောက်တလှမ်းထပ်လှမ်း သည်။ ထို့နောက်အိမ်ထဲသို့ တဟုန်ထိုးပြေးဝင်သွားကာ အဆက်မပြတ်အော်တော့သည်။
“ မာမီ။ မာမီ....“
သူသည် ဆင်ဝင်အောက်ရှိကားဂိုထောင်နံရံကိုမှီရပ်ရင်း မြေကြီးကိုခြေထောက်ဖြင့် ဟိုခြစ်ဒီခြစ် လုပ်နေသည်။ နဖူးပေါ်ကချွေးတွေကတော့ခြောက်ကုန်ပြီ။ အင်္ကျီအောက်မှာတော့ စေးထန်းထန်းခံစားနေရ တုန်းပင်။
တခါတုန်းက ပခုံးတွေငိုက်စိုက်ကျနေပြီး ဖြူဖျော့၍ စကားကိုဖြည်းညှင်းစွာပြောနေသော သူ့အဖေကိုမြင်ခဲ့ရသည်။ ကဖေးဆိုင်ထဲတွင်ဖြစ်ခဲ့သော အမျိုးသားကြီးနှစ်ဦး၏ ရန်ပွဲမှာ တော်တော်အခြေ အနေဆိုးရွားခဲ့ ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးလည်းအထိနာခဲ့ကြသည်။ တဖက်လူမှာ ယာလုပ်သားကြီးဖြစ်သည်။ ဟမ်မီလ်တန်မှာ သူ့ဖခင်ကိုအလွန်ချစ်ပြီး ဖခင်နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စတော်တော်များများကိုမှတ်မိသည်။ ခုအချိန်မှာတော့ထိုလူနှင့်ဖြစ်ခဲ့သောသူ့ဖခင်၏ရန်ပွဲကို ပြန်စဉ်းစားမိနေတော့သည်။
မိန်းမက သူ့ခေါင်းကို သူမလက်နှင့်ပင့်မလိုက်ပြီး ရေရွတ်၏။
“ အိမ်ထဲဝင်၊ ရေချိုး၊ တခုခုစားပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ ကျမကိုပြောပါဦး။ ညစာတွေ ကတော့နွေးနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်။ ရော်ဂျာတော့ အိပ်ရာဝင်သွားပြီ။“
သို့သော် သူ့သားက သူ့အားလှမ်းခေါ်နေသံကိုကြားနေရသည်။
“ သူမအိပ်သေးဘူး“ ဟု အမျိုးသမီးကပြောသည်။
“ ခနနေရင် ကိုယ်ပြန်ဆင်းလာခဲ့မယ်။ တခုခုသောက်ကြတာပေါ့။“
“ ကျမဖြင့် ခုထိမယုံနိုင်သေးဘူး။“
သူ့မိန်းမက ခေါင်းခါရင်းပြောသည်။ သူကသားအခန်းထဲဝင်သွားပြီး ကုတင်ပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက် သည်။
“ သားမအိပ်သေးဘူးလား။ နောက်ကျနေပြီ။ အိပ်တော့နော်။ ဂွတ်နိုက်...“
ကလေးကပြန်နှုတ်ဆက်သည်။ သူကသား၏လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ ကောင်လေးက ည၀တ် အင်္ကျီဝတ်ထား၏။ လတ်ဆတ်နွေးထွေးသော သား၏ကိုယ်သင်းနံ့ကိုဟမ်မီလ်တန်ရှူရှိုက်မိသည်။ သူကသား ၏ကျောပြင်ကို ခပ်ဖွဖွပုတ်ပေးနေရင်းပြောလိုက်သည်။
“ ဒီကနေ့ကစပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေတော့နော်သား။ အဲဒီလိုအိမ်နီးချင်းမျိုးတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေ။ ပြီးတော့အခုလို စက်ဘီးကိုဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုးနဲ့ အဲဒီလိုမျိုးတခြားကိစ္စတွေကိုလည်း ဒက်ဒီထပ်မကြားချင် တော့ဘူးနော်။ ရှင်းလားသား..“
ရော်ဂျာက ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ သူသည်သားကိုဖက်ထားသောလက်အားဖယ်လိုက်ကာအိပ်ရာ ခင်းကိုပျံ့အောင်ပြန်ခင်းပေးလိုက်သည်။
“ အိုကေ...။ ဂွတ်နိုက်နော်သား။“
သူကသားကိုနမ်းဖို့ ကိုယ်ကိုငုံ့ကိုင်းလိုက်ချိန်မှာ ကောင်ကလေးကပြောသည်။
“ ဒက်ဒီ..။ အဘိုးကလည်း ဒက်ဒီလိုပဲအားရှိတာပဲမဟုတ်လား။ သူ ဒက်ဒီ့အရွယ်တုန်းကလေ။ ဒက်ဒီသိ ပါတယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား။“
“ ဒက်ဒီကိုးနှစ်သားလောက်တုန်းကအကြောင်းမင်းပြောချင်တာမဟုတ်လား။ ဟုတ်တယ်။ မင်း အဖိုး ကအားသန်တယ်။“
“ တခါတလေကျရင် ကျနော်အဘိုးကိုသိပ်မှတ်မိဘူး။ အဘိုးကိုရော တခြားဟာတွေကိုရော ကျနော်မေ့ မသွားချင်ဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာကိုသိတယ်မဟုတ်လားဒက်ဒီ။“
ဟမ်မီလ်တန်က အဖြေမပေးတော့ ကောင်လေးကလှဲနေရာမှကုန်းထလာသည်။
“ ဒက်ဒီငယ်ငယ်တုန်းက အဘိုးနဲ့ဒက်ဒီက အခုဒက်ဒီနဲ့ကျနော့်လိုပဲလားဟင်။ ဒက်ဒီက အဘိုးကို ကျနော့်ထက်ပိုချစ်လား။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်နဲ့တုတူပဲချစ်လား။“
ကောင်လေးကပြတ်ပြတ်သားသားပင်မေး၏။ ဟမ်မီလ်တန်က စောင်အောက်မှ သူ့ခြေထောက် တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အဝေးကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ သူကခုချိန်ထိတစုံတရာမဖြေသေးသောအခါ သူ့သားကထပ် မေးပြန်သည်။
“ အဘိုးကဆေးလိပ်သောက်သလား။ ကျနော်ထင်တာတော့ ဆေးတံလားမသိဘူးသောက်တယ်။“
“ ဟုတ်တယ်။ သူမသေခင်လေးမှာပဲ ဆေးတံစသောက်တာ။ အရင်တုန်းကသူ စီးကရက် သောက်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ တခုခုစိတ်ဓါတ်ကျတယ်ထင်ပါရဲ့၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ တခါ တံဆိပ်ပြောင်းပြီး ပြန်သောက်ပြန်ရော။ သားကို ဒက်ဒီပြမယ်။ ဒက်ဒီ့လက်ဖမိုးကိုနမ်းကြည့်စမ်း။“
“ ဘာနံ့ မှမရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဒက်ဒီ။“
ဟမ်မီလ်တန်ကလည်း သူ့လက်ချောင်းတွေနှင့် လက်ဖမိုးတွေကိုနမ်းကြည့်သည်။
“ အခုတော့ ဒက်ဒီလည်းအနံ့မရဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ ဆေးလိပ်နံ့တွေရခဲ့တယ်။ သားကို ဒက်ဒီတခု ပြမလို့။ ဒါပေမယ့်ခုကတော့ညဥ့်နက်ပြီ။ အိပ်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်။“
ကောင်လေးက စောင်အောက်လှိမ့်ဝင်လိုက်ကာ သူ့အဖေတံခါးဝဆီလျှောက်သွားတာနှင့် မီးခလုတ်ကို ပိတ်တော့မည့်သူ့အဖေလက်ကိုကြည့်နေသည်။ ပြီးတော့မှ ကောင်ကလေးကပြောသည်။
“ ဒက်ဒီကတော့ ကျနော်ကိုအူကြောင်ကြောင်လို့ထင်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒက်ဒီငယ်ငယ်တုန်းက ဒက်ဒီ့ကို ကျနော်သိခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆုတောင်းမိတယ်။ ဒက်ဒီက အခုကျနော့်အရွယ်မှာပေါ့။ ကျနော် ဘယ်လိုပြော ရမလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အထီးကျန်နေသလိုပဲ။ အဲဒါကဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ အဲဒီအကြောင်းတွေ အခုစဉ်းစားလိုက်ရင် ဒက်ဒီ့ကိုကျနော်အခုကတည်းကကြိုလွမ်းနေသလိုပဲ။ အဲဒါ နည်းနည်းတော့ အူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အင်းလေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခန်း တံခါးကိုဖွင့်သွားပေးပါဒက်ဒီ..။“
ဟမ်မီလ်တန်က သား၏အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လျှက်သားထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် တ၀က်လောက်ပဲ ဖွင့်ထားပေးခဲ့ရင်ပိုကောင်းမှာဟုတွေးမိသည်။
(Raymond Carver ၏ Bicycle, Muscles, Cigarettes ကိုဆီလျှော်အောင်ပြန်ဆိုပါသည်။)
ကျနော့်သမီးကလဲ ကျနော်တို့မောင်နှမနဲ့ မောင်နှမ